Shiinaha V Taxanaha CNC Milling mashiinka saddex raad Soo saar iyo Warshad | BiGa
Naqshadeynta qaabdhismeedka sariirta ugufiican, waxay u adkeysan kartaa firfircoonida ay dhalisay G-sare, oo u adag sida dhagaxa oo xasilloon sida buur. Dunmiiqa Gaaban gaagaaban wuxuu leeyahay adkaansho aad u fiican, taas oo hagaajinaysa waxtarka isla markaana yareyneysa qalabka wax lagu xiro.
Model Cutub V-6 V-8 V-11
X safarka dhidibka mm 600 800 1100
Y dhidibka safarka mm 400 500 650
Z dhidibka safarka mm 450 500 650
Fogaanta laga bilaabo dhamaadka dunmiiqa ilaa worktable mm 170-620 100-600 100-750
Fogaanta laga bilaabo xarunta dunmiiqa ilaa safka mm 480 556 650
Cabirka lagu shaqeyn karo mm 700x420 1000x500 1200x650
Xamuulka ugu badan kg 350 600 2000
T-slot (nambar-ballaadhkiisu x x garoonka) mm 18-3x125 18-4x120 18-5x120
Saddex-dhidibka feed degdeg ah m / min 60/60/48 48/48/48 36/36/36
Saddex-dhidibka goynta feed mm / daqiiqo 1-10000 1-10000 1-10000
Xawaaraha dunmiiqa rpm 12000 (OP10000 ~ 15000) 12000 (OP10000 ~ 15000) 8000/10000/12000
Tilmaamaha dunmiiqa BT40 BT40 BT40 / BT50
Awooda Spindle kw 5.5 7.5 11
Xaqiijinta meelaynta mm ± 0.005 / 300 ± 0.005 / 300 ± 0.005 / 300
Xaqiijinta meeleynta ku celcelinta mm ± 0.003 ± 0.003 ± 0.003
Miisaanka mashiinka kg 4200 5500 6800
Cabirka mashiinka mm 1900x2350x2300 2450x2350x2650 3300x2800x2800
• Naqshadeynta qaabdhismeedka sariirta ugufiican, waxay u adkeysan kartaa firfircoonida ay dhalisay G-sare, oo u adag sida dhagaxa oo xasilloon sida buur.
• Dunmiiqa Gaaban gaagaaban wuxuu leeyahay adkaansho aad u fiican, taas oo hagaajinaysa waxtarka isla markaana yareyneysa qalabka wax lagu xiro.
• Saddex-dhudhun barokac degdeg ah, oo si weyn u soo gaabinaaya waqtiga howsha.
• Nidaamka isbeddelka qalabka aadka u deggan, yaraynta waqtiga aan shaqeynin.
• Iyadoo la adeegsanayo qaab-dhismeedka ka-saarista gunta dambe, way ku habboon tahay in la nadiifiyo qashinka mana sahlana in saliid la daadiyo.
• Dhamaan seddexda faasas waxaa taageera biraha toosan ee adag oo xawaare sare leh iyo saxnaan sare.
Sifooyinka mashiinka indhaha
Nooca Disc-ka qalabka wax-ka-beddelaha tooska ah, waxay qaadataa oo keliya 1.8 ilbidhiqsi si uu u beddelo aaladda iyadoo la isticmaalayo kamarad 3D ah. Saxanka qalabku wuxuu qaadi karaa 24 qalab, oo la jaan qaadi kara baahiyaha kala duwan ee ka baaraandegista ah; aaladdu waa fududahay in la raro oo la dejiyo, la isticmaalo nooc kasta, iyo maaraynta qalabka iyo diiwaangelinta ayaa aad ugu habboon.
Naqshadda sanka gaaban ee madaxa dunmiiqa iyo biyo-shubashada u eg giraanta ayaa sare u qaadi kara waxtarka gudbinta ee matoorka dunmiiqa. Qalafsanaanta goynta ayaa si gaar ah u wanaagsan, taas oo hagaajinaysa saxnaanta mashiinka waxayna kordhisaa nolosha dunmiiqa.
Iyadoo aan miisaan culus lahayn
Z-axis wuxuu qaadanayaa naqshad aan miisaan lahayn oo waxaa lagu dhejiyaa mashiinka qalabka bareega ee awoodda sare leh si loo hagaajiyo waxqabadka wadista Z-axis si loo gaaro xawaare sare iyo dusha ugu fiican
Saddexda dhidib waxay qireen Taiwan HIWIN / PMI slide toosan, oo leh adkeyn sare, buuq yar, isqabqabsi yar, iyo xasaasiyad sare, taas oo hagaajin karta xawaaraha howsha iyo saxsanaanta.
Hore: VMC Taxanaha CNC Milling mashiinka saddex raad adag
Xiga: Mashiinka HV Taxanaha CNC Milling laba waddo iyo hal waddo adag
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha Sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Dhufto Double-End, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Cagaaran, Nooca Gawaarida Mashiinka Mashiinka, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Hal-Dhamaystiran,